Lisitry ny fananana trano Ho amidy sy manofa any Wellington
Real Estate Listings: Wellington
Real Estate Listings For Sale and For Rent in Wellington
New Zealand (Māori: Aotearoa [aɔˈtɛaɾɔa]) dia firenena nosy masiaka ao amin'ny Ranomasimbe Pasifika atsimo. Manana velaran-tany roa lehibe ilay firenena - ny North Island (Te Ika-a-Māui), ary ny Nosy South (Te Waipounamu) - ary manodidina ny 600 nosy kely. Izy io dia velarantanin'ny velarantanina 268 000 kilometatra toradroa (103,500 metatra toradroa). New Zealand dia manodidina ny 2 000 kilometatra (1 200 mi) atsinanan'i Aostralia izay miampita ny ranomasina Tasman ary 1 000 kilometatra (600 mi) any atsimon'ny faritry ny nosy Pasifika any New Caledonia, Fiji ary Tonga. Noho ny halavany dia io no tany lehibe lehibe nampiasain'ny olona. Nandritra ny fotoana nitokana azy naharitra ela, i New Zealand dia namorona zavamaniry tsy manam-paharoa hafa momba ny biby sy ny holatra ary ny zavamaniry. Ny topografia samihafa misy ao amin'ilay firenena sy ny tampon-tendrombohitra maranitra, toa ny Southern Alps, dia mitrandraka betsaka amin'ny firongatry ny tany sy ny fipoahan'ny volkano. Ny tanànan'i New Zealand dia Wellington, ary Auckland no be mponina indrindra ao. Teo anelanelan'ny 1280 sy 1350 dia nanomboka nanorim-ponenana tao amin'ireo nosy ireo Polynesianina ary namolavola kolontsaina iray mampiavaka azy. Tamin'ny 1642, ny mpandinika holandey Abel Tasman dia firenena eoropeana voalohany nahita an'i New Zealand. Tamin'ny 1840, ny solontenan'ny United Kingdom sy ny lohan'ny Māori dia nanao sonia ny Fifanarahana Waitangi, izay nanambara ny fiandrianan'i Angletera amin'ireo nosy ireo. Tamin'ny taona 1841 dia nanjary zanatany i New Zealand tany amin'ny Fanjakana Britanika ary tamin'ny taona 1907 dia nanjaka; nahazo fahaleovan-tena tanteraka tamin'ny 1947 ary ny fanjakana anglisy dia lasa lohan'ny fanjakana. Ankehitriny, ny ankamaroan'ny mponin'i New Zealand izay 4,9 tapitrisa dia avy amin'ny firenena Eropeana; ny teratany ny teratany no vitsy an'isa lehibe indrindra, arahin'ireo Azia sy Island Island Islanders. Eritrereto izany, ny kolontsaina any Nouvelle-Zélande dia avy amin'ny Malagasy sy ny anglisy tany am-boalohany, miaraka amin'ny fihoaran'ny fifindra-monina vao haingana. Ny fiteny ofisialy dia anglisy, Māori ary New Zealand Sign Language, miaraka amin'ny teny anglisy mahery vaika. Firenena mandroso, manana toerana ambony i New Zealand amin'ny fampitahana iraisam-pirenena amin'ny fampisehoana nasionaly, toa ny kalitaon'ny fiainana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fiarovana ny fahalalahana sivily ary ny fahalalahana ara-toekarena. Niatrika fiovana lehibe ara-toekarena i New Zealand nandritra ny taona 1980, izay nanova azy io ho mpiaro ny tontolo ara-barotra malalaka. Ny sehatry ny serivisy dia manjaka ny harem-pirenena, manaraka ny sehatra indostrialy, ary ny fambolena; ny fizahan-tany iraisam-pirenena dia loharanom-bola lehibe. Voavidy ao amin'ny firenena ny fahefana mpanao lalàna ao amin'ny Antenimiera voafidy sy unicameral, raha ny fahefana politika mpanatanteraka kosa dia tarihan'ny kabinetra izay tarihin'ny praiminisitra ankehitriny, Jacinda Ardern. Mpanjakavavy Elizabeth II no mpanjakavavy ao amin'ny firenena ary misolo tena ny governora jeneraly, Dame Patsy Reddy ankehitriny. Ankoatr'izay, i New Zealand dia nokarakaraina tamin'ny filankevitra isam-paritra 11 sy manam-pahefana 67 an'ny territorire ho an'ny tanjon'ny governemanta eo an-toerana. Ny Realm of New Zealand dia ahitana an'i Tokelau (faritany miankina); ny Cook Cook sy i Niue (fanjakana mitantana samirery amin'ny fifandraisana malalaka miaraka amin'i Nouvelle Zélande); ary ny Ross Dependency, izay faritany teratany New Zealand any Antartika. New Zealand dia mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana, Commonwealth of Nations, ANZUS, Fikambanana ho an'ny fiaraha-miasa sy fampandrosoana ary toekarena, ASEAN Plus Six, fiaraha-miasa ara-toekarena any Azia-Pasifika, Forum Community and Pacific Island Forum.